We Fight We Win. -- " More than Media ": နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင်ကြော်ညာခဲ့သည့် စင်္ကင်္ာပူနိုင်ငံကဲ့သို့ခေတ်မှီမြို့ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင့် ဧပြီ(၂)ရက်မှစရ်ျ တရက်လျင်လျှပ်စစ်မီး(၆)နာရီ အလှည့်ကျပေးမည်။
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင်ကြော်ညာခဲ့သည့် စင်္ကင်္ာပူနိုင်ငံကဲ့သို့ခေတ်မှီမြို့ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင့် ဧပြီ(၂)ရက်မှစရ်ျ တရက်လျင်လျှပ်စစ်မီး(၆)နာရီ အလှည့်ကျပေးမည်။
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင် ရန်ကုန်မြို့အား စင်္ကာပူနိုင်ငံအတိုင်း ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စီမံကိန်းများရေးဆွဲကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် အကျယ်တဝင့်ဖေါ်ပြပြီး ကြွေးကြော်ခဲ့သော်လည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်ရက် ဧပြီလ (၂)ရက်မှစတင်ကာ လျှပ်စီမီးတရက်လျင် (၆)နာရီသာ ပေးဝေတော့မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့အား ဇုံ A, B, C ဇုံ(၃)ခု ခွဲပြီးအလှည့်ကျပေးပြီး VIPရပ်ကွက် အိမ်ရာများ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနေရာများ၊ဆေးရုံများ၊သံရုံးများ၊ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များကို တော့ ၂၄နာရီမီးပေးမည်ဟု သိရသည်။
နေပြည်တော်မှာတော့ လမ်းမီးများကို ၂၄ နာရီထိန်ထိန်ငြီးအောင်ထွန်းထားပြီး မန္တလေး၊မိထ္ထီလာနှင့် မြန်နိုင်ငံအနှံအပြား မှာမြို့များတွင် တရက်လျင် လျှပ်စစ်မီး (၃)နာရီတောင် ရက်ခြားရနေသည်ကြားသိရသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံမှ ထွက်ရှိတဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့အားလုံးနီးပါးကို တရုပ်နှင့် ထိုင်းသို့တင်ပို့ရောင်းရာမှရရှိသော ဒေါ်ဘီလျံချီသည့် ငွေများစာရင်းမရှိပျောက်ဆုံးနေသည့်အပြင် ပြည်ပအကြွေးဆပ်ရန် ဒေါ်ဘီလျံပေါင်းများစွာအကြွေးတင်နေမှုများကို ပြည်သူများအကြား ပြောဆိုဆွေးနွေးလာကြသည်ဟု သိရှိသည်။
မန္တလေးတိုင်း၊အမရပူမြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများအား လျှပ်စစ်အသုံးမပြုရန် အချိန်ဇယားထုတ်ပြီးစာဖြင့်တားမြစ်။
All these Military Gangsters have no brain how to set up the country economic.
In 1962, Nay Win also announced that they would tried to increase 2times of living stadard during BURMESE WAY TO SOCIALISM.
Like his father,now Thein Sein also say easily.
Now the country (the richest in Asia in 1960) becomes the poorest in the world.
They all lie to country,world and
Naturally Military Government does not know
1)The great value of Democracy
2)How to set up the long-term international economic foundation ofacountry under one roof of DEMOCRACY.
During 50 years....
Only Military Gangster's family/ parters became
-more healthy and healthy
But the country has became the poortest in world.
Citizens are dying early at their younger ages due to very poor living atandards
29 March 2012 at 04:05
မီတာခ တွေဈေးတက်တယ် ။ ဒါပေမဲ့လူထုက ဒီလိုအချိန် ရောက်ရင်အမြဲတမ်း မီးမရရေမရ ဖြစ်ကြရတယ်။ ခေတ်မှီမြို.တော်တည်ဆောက်နေလို. ဖြစ်မှာပါ